Gwema ukuthunjwa ngabathuthukisi bakho | Martech Zone
Gwema ukuthunjwa ngabathuthukisi bakho
UMsombuluko, May 12, 2008 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Kule mpelasonto ngiqale ingxoxo nomculi wakule ndawo obesiza umphathi wakhe ngokuphathwa kwezicelo ezimbalwa zewebhu ezingabaphathi bakhe.
Ingxoxo yathatha ithuba futhi okunye ukuvota kwaqhubeka mayelana nokukhokha imali yokuthuthuka yamasonto onke ngaphandle kokubona inqubekelaphambili nonjiniyela abasebenza naye. Manje unjiniyela ufuna ukubakhokhisa enye imali eyisamba ukuqedela iphrojekthi kanye nemali yesondlo yamasonto onke ukumboza ezinye izicelo. Kuba kubi kakhulu.
Umthuthukisi udlulise amagama wesizinda ukuze akwazi ukuwaphatha. Umthuthukisi futhi ubamba uhlelo lokusebenza ku-akhawunti yakhe yokubamba. Ngamafuphi, unjiniyela manje ubabambile.
Ngokujabulisayo, owesifazane engisebenza naye wafuna ukufinyelela kokuphatha esikhathini esedlule ukuhlela amanye amafayela esifanekiso esayithi. Umthuthukisi ubengamnikeza ukufinyelela okulinganiselwe kepha akazange akwenze. Yena (ngobuvila) wamnikeza ukungena ngemvume kwesayithi. Namuhla ebusuku ngisebenzise lokho kufinyelela ukwenza isipele yonke ikhodi yesayithi. Ngiphinde ngathola ukuthi iyiphi i-software yokuphatha ayisebenzisayo futhi ngahamba ngaya ekuphathweni kwe-database lapho engikwazi khona ukuthekelisa imininingwane yezicelo nezinhlaka zethebula. Hawu.
Umnikazi wayehlela ukuhambisa izingosi kumagama wesizinda esisha lapho ukuthuthukiswa sekuqediwe. Lokho kukhulu ngoba kusho ukuthi izizinda zamanje zingaphelelwa yisikhathi lapho kwenzeka kukhona ukwahlukana okuthukuthele phakathi konjiniyela nenkampani. Ngikubonile lokhu kwenzeka ngaphambili.
Amanye amathiphu uma uzothola ithimba lezentuthuko elithunyelwe ngaphandle:
Bhalisa amagama akho wesizinda egameni lenkampani yakho. Akukubi ukuthi unjiniyela wakho abe njengoxhumana naye kwezobuchwepheshe ku-akhawunti, kepha ungalokothi dlulisa ubunikazi besizinda kunoma ngubani ongaphandle kwenkampani yakho.
Ukubamba uhlelo lwakho lokusebenza noma iSayithi
Kuhle ukuthi unjiniyela wakho angaba nenkampani yokubamba futhi angakusingatha isiza sakho, kepha ungakwenzi. Esikhundleni salokho, buza izincomo zakhe ukuthi ungabamba kuphi isicelo. Kuyiqiniso ukuthi onjiniyela bajwayelana nesoftware yokuphatha, izinhlobo, kanye nendawo yezinsizakusebenza futhi lokho kungasiza ukuthi umkhiqizo wakho uqedwe ngokushesha. Lokho kusho, noma kunjalo, ungumnikazi we-akhawunti yokubamba futhi ungeze unjiniyela wakho ngokungena kwakhe nokufinyelela kwakhe. Ngale ndlela, ungadonsa ipulagi noma kunini lapho udinga khona.
Ungacabangi ukuthi ikhodi ingeyakho, uyibhale phansi. Uma ungafuni ukuthi unjiniyela wakho asebenzise izixazululo omkhokhele zona ukuthi azithuthukise kwenye indawo, kufanele unqume ukuthi ngesikhathi sesivumelwano. Ngisungule izixazululo ngale ndlela kepha ngazithuthukisa lapho ngigcina khona amalungelo ekhodi. Kulokhu kokugcina, ngibonisene ngezindleko zesicelo esiphansi ukuze kube khona isisusa enkampanini sokuthi inginike amalungelo. Uma ungenandaba nonjiniyela wakho usebenzisa ikhodi yakho kwenye indawo, lapho-ke akufanele ukhokhe idola eliphezulu!
Thola umbono wesibili!
Akuyilimazi imizwa yami lapho abantu bengitshela ukuthi bathatha amabhidi noma babonisane nabanye ochwepheshe. Eqinisweni, ngiyayincoma!
Iqiniso ukuthi ukhokhela ithalenta lonjiniyela wakho kepha kufanele ugcine ukulawula nobunikazi phezu kombono. Kungokwakho. Nguwe otshalile imali kuyo, wena owabeka ibhizinisi lakho engozini futhi wazuza ngayo… futhi nguwe okufanele uyigcine. Onjiniyela bangashintshwa futhi lokho akufanele neze kubeke uhlelo lwakho lokusebenza, noma okubi kakhulu - ibhizinisi lakho, engcupheni.
Tags: ukukhwabanisabluetoothi-google algorithmi-sms yeselulawebsukumaketha imiyalezoukuthumela imiyalezoukuhlanganiswa kwe-sms ye-wordpress
Gcina Okuqukethwe Kwakho Kusha! Kufaka namazwana
Isebenzisa i-Web Analytics
May 13, 2008 ku-5: 04 PM
Ngingunjiniyela wohlelo lokusebenza lwewebhu futhi ngiyavumelana neningi lamaphoyinti akho (mhlawumbe wonke) kepha ngithanda ukucaciselwa ku- # 3.
Ukuphindaphindwa kwesiza noma kwesicelo esithengiselwe enye inkampani (noma okubi kakhulu esincintisana naye) akulungile futhi kufanele kubekwe njalo njengokungamukeleki enkontilekeni yakho. Kodwa-ke, ngithole izixazululo ezintsha zezinkinga ezijwayelekile ngenkathi ngisebenza kuphrojekthi yeklayenti engahlangene neze ne-biz yabo futhi ayimeleli ingxenye ebalulekile yesisombululo sonke.
Iklayenti lifuna izinga lekhasi nokulawulwa kwezinga lenkambu kuhlanganiswe nezindima zomsebenzisi. Ukusebenza “kwebhokisi” kwe-ASP.Net kwenza izimvume zezinga lefolda. Ngakho-ke ngelula izimvume zomdabu ze- .Net futhi ngetha isixazululo njengengxenye yohlelo lokusebenza lwewebhu jikelele.
Ngikholwa ukuthi banelungelo lokuthola yonke i-codebase (njengoba kubekiwe esivumelwaneni) kepha ngizizwa ngifanelekile ukusebenzisa indlela efanayo kanye neziqeshana zekhodi ukufeza lokhu kunwetshwa kumaphrojekthi azayo.
Lokhu ngikwenze ngenkathi ngifuywa yinkampani ebonisanayo. Ngabe inkampani ebonisanayo ingaba nelungelo ngombono wakho ukuthi ibuyele emuva ikopishe leso sixazululo, isimakete njengesabo?
Aug 18, 2011 ngo-6: 24 PM
Ngicabanga ukuthi siyavumelana. Iphuzu lami kulokhu ukuqinisekisa ukuthi unayo ikhodi futhi ungaphuma emnyango ngayo. Uma unjiniyela wakho ekuqoqelela ikhodi futhi eyihlohlela kusayithi lakho - awunayo ikhodi. Ngikubonile lokhu kwenzeka ngayo yonke into kusuka kugrafu, Flash, .NET, Java… noma yini edinga ifayili lomthombo futhi ikhishwe.
May 13, 2008 ku-5: 53 PM
Ngiyabona lapho uvela khona futhi ngenkathi ngingavumelani nakho konke okungu-100% (nginemihume), izinkampani kufanele zikugcine lokhu engqondweni.
1. NGOKUPHELELE. Ayikwazi ukucindezela lokhu ngokwanele. Ngisebenze enkampanini encane eyenza lokhu futhi ngazizwa ngicindezelwa kakhulu ukuba necala ngokubandakanyeka. Ngijabule kakhulu ukuthi ngikwazi ukuphuma lapho. Amakhasimende kufanele agcine ngokuphelele ukulawula kwezizinda zawo. Uma benomuntu onolwazi ngokwanele, unganiki unjiniyela ukufinyelela kulokhu. Uma kungenjalo, qiniseka ukuthi unjiniyela unendlela yokuthi ungashintsha imininingwane / udlulise isizinda ngesibonisi somthengisi sohlobo oluthile okungenani.
2. Ngingavumelana ngokwengxenye nalokhu kepha-ke kuya ngesimo. Uma usebenzisa uhlelo olulula lwe-PHP futhi udinga ukusingathwa kwezindleko eziphansi, ngazo zonke izindlela, thola i-akhawunti ye-LunarPages noma i-DreamHost noma okuthile bese uyilahla lapho. Nikeza umthuthukisi ukufinyelela. Kodwa-ke, ukusingathwa okwabelwana ngemali ephansi ngokuqinisekile kunezinkinga zako… ikakhulukazi ezintweni ezinkulu. Kepha uma umkhulu ngokwanele ukuthi ungakhathazeka ngalokho kufanele ube nomuntu othile wobuchwepheshe kubasebenzi ongabhekana nakho. Okuningi kusobala ngokuthembela. Impela isihogo sifaka okuthile esivumelwaneni uma ukwazi mayelana nalolu hlobo lwento (imikhawulo nokunye). Ukusingathwa komuntu wesithathu kuhle uma unjiniyela engadingi ukwenza noma yini efiselekayo. Ngiyavuma ngidabukile ngoba empeleni kuyinto yesimo. Kuya ngosayizi wesayithi, ubuchwepheshe obusetshenzisiwe. Uma kuzoba kukhulu, ucabanga ukuqasha umuntu kubasebenzi. Akuyona inketho ngaso sonke isikhathi, kepha iphephe ngezinto ezinkulu.
3. Lokhu futhi yinto eyenziwa yinkampani yami yangaphambili. Ungahamba, bazokunikeza i-HTML, izithombe njll. kepha ayikho ikhodi. Ikhodi kwakuyisevisi yokuqashisa ngokuyisisekelo. Uma kushiwo lokho, kukhona okungokwakho nokungokwakho. Bengihlala ngenza ukuthengisa okungakhethi kuphela. Ngokuyisisekelo, ngidinga ukukwazi ukusebenzisa kabusha izinto zami. Anginankinga nokuthi iklayenti lingumnikazi wayo, lenze lokho abakufunayo ngayo nokuthi omunye umuntu alisebenzele phansi ... kodwa angizibambisi ngokwami ​​futhi kufanele ngivuselele isondo njalo.
4. Njalo. Njalo. Njalo.
May 18, 2008 ku-5: 48 PM
Okuthunyelwe okuhle… kwenziwe kahle yize ngingavumelani nento eyodwa (# 2):
"Kuhle ukuthi unjiniyela wakho abe nenkampani ezosingatha indawo futhi akwazi ukukusungulela isiza sakho, kodwa ungakwenzi lokho."
Yize ngiyawuqonda umqondo ngemuva kwalokhu, kungaphikisana nokukhiqiza kwezinye izimo ukugunyaza ukuthi iphrojekthi yakho isingathwe kwenye indawo. Uma inkampani ethuthukisa isiza sakho noma uhlelo lwakho lokusebenza inesikhulumi sokubamba abakhetha ukusisebenzisa, maningi amathuba okuthi kuzosebenza kangcono futhi kukhiqize bona bakusebenzise.
Ngokwengeziwe, ngokubuka kwefilosofi, uma wenqaba ukusebenzisa ipulatifomu yonjiniyela wakho wokubamba ngoba awufuni "ukubanjwa", lokhu kusetha ithoni lokungathembi kusukela ekuqaleni. Uma ungamethembi unjiniyela wakho ngokwanele ukuba ubungaze nabo, ngabe ufuna ngempela ukusebenza nabo kwasekuqaleni?
Ngiyazi ukuthi izindaba eziningi ezethusayo zikhona mayelana nalesi simo, kepha ngokujwayelekile ngincoma ukuthi ugxile ekutholeni unjiniyela omethembayo. Ungasebenzisa ukusingathwa konjiniyela wakho bese uqhubeka uzivikela ngokucela ukufinyelela kokulawula futhi uzenzele izipele zakho.
Futhi, okuthunyelwe okuhle kanye nemininingwane ewusizo kakhulu.
May 19, 2008 ku-8: 56 AM
Kungazwakala njengenkinga yokwethenjwa kepha angicabangi ukuthi iyinkinga - empeleni iyinkinga yokulawula nomthwalo wemfanelo. Uma uzotshala imali ebonakalayo ekuthuthukisweni kwewebhusayithi yakho, lapho-ke kufanele uqiniseke ukuthi uyakwazi ukulawula imvelo yayo.
Izinto zenzeka ebhizinisini eziphula ubudlelwano futhi akudingeki ukuthi zibe zimbi. Mhlawumbe unjiniyela / inkampani yakho ithola iklayenti elikhulu kakhulu futhi ayikwazi ukukuthengela isikhathi. Mhlawumbe bashintsha izinhloso zebhizinisi. Kwesinye isikhathi inkampani yabo yokubamba ingaba nezinkinga.
Ngikhuthaza ukuthi ulawule futhi ubhekane nokusingathwa kwakho ukuze uncike kunjiniyela wakho ngalokho akwaziyo ngakho - ukuthuthukisa!
Ngiyakwazisa ukubuyela emuva, uMichael.
Aug 19, 2011 ku-12: 43 AM
Ngingumqambi wohlelo lokusebenza lwewebhu, futhi ngicabanga ukuthi ushaye isipikili ekhanda. Eminye imicabango:
Ngicabanga ukuthi wonke umuntu angavuma (futhi usekelwe kumazwana angezansi) # 1 ngokuphelele. Ungalokothi, wenze njalo. Njalo. Ngaphansi kwanoma yisiphi isimo.
Ngithathe okuhlukile ku- # 2 kunabanye babaqambi engikanye nabo: siyenqaba ukusingatha umkhiqizo wokugcina wamakhasimende ethu (kunjalo, sisingatha isiphakeli sokuhlola samakhasimende ukuze ahlole ukushayela ngesikhathi sokuthuthuka). Siyajabula ukusiza amaklayenti ukuthi asethe ukusingatha wona uqobo noma ukuthola umhlinzeki wokusingathwa. Simane asifuni ukungena ebhizinisini lokusingathwa. Uma lokho kusho ukuguqula umsebenzi, makube njalo. Kunezinkampani eziningi zokubamba noma amafemu wengqalasizinda laphaya kunanikeza le nsizakalo ngentengo eshibhile. Sikhuthaza ukuthwalwa komsebenzi wethu, futhi sizokwenza konke okusemandleni ukusiza ukuthi uwusingathe, noma ngabe iklayenti lishintsha ukubamba abahlinzeki iminyaka eminingi phansi komgwaqo.
Okwe- # 3, amaklayenti ethu athola yonke ikhodi yomthombo yomkhiqizo wokugcina nge-caveat eyodwa: Ngemikhiqizo yenkampani yangaphandle esetshenziswa kusixazululo (njengokulawulwa kwewebhu kusuka kuTelerik noma i-Component One), singanikeza iklayenti i-dll ehlanganisiwe ukulawula komuntu wesithathu (yisho igridi). Izivumelwano zethu zokulayisensa nalezo zinkampani ezivela eceleni (esizinikeza iklayenti) zisivimbela ekusabalaliseni ikhodi yomthombo yalolo hlobo lwezilawuli, ngoba impahla yomqondo yomuntu wesithathu, hhayi eyethu. Ukusetshenziswa kwalezi zinhlobo zemikhiqizo konga isikhathi sokuthuthuka seklayenti futhi kushibhile kakhulu kunokwakha ukusebenza okufanayo kusukela ekuqaleni. Sibheka phambili ngale nqubomgomo ngaphambi kokuba kwenziwe noma yimuphi umsebenzi. Vele, uma iklayenti lifisa ukukhokhela ukuthuthukiswa kokulawulwa kwesiko (esikhundleni sokusebenzisa umkhiqizo owakhiwe kuqala ovela eceleni) sinikeza ikhodi yomthombo yalolo lawulo lwangokwezifiso kanye nakho konke okunye.
Uma kukhulunywa ngokusetshenziswa kabusha kwamakhodi, sikubeka phambili ukuthi singasebenzisa izingxenye ezithile zekhodi ngaphandle kokuthi yenzelwe ngokucacile ukusetshenziswa kweklayenti (yisho inqubo yebhizinisi ephathelene) ngaphambi kokuba kwenziwe noma yimuphi umsebenzi. Uma iklayenti lifuna ukuthi ikhodi ekhethekile ithuthukiswe, lokho kuyatholakala kubo.
Njengoba abanye besho, # 4 kunconywa njalo. Njalo!